हस्तमैथुन गर्दा यस्तो समस्या हुन्छ ? पढ्नुस् डाक्टर कोठारीका सुझाव - Daily Lokmandu
Homeस्वास्थ्य/जिबनशैलीहस्तमैथुन गर्दा यस्तो समस्या हुन्छ ? पढ्नुस् डाक्टर कोठारीका सुझाव
July 11, 2018 स्वास्थ्य/जिबनशैली Comments Off on हस्तमैथुन गर्दा यस्तो समस्या हुन्छ ? पढ्नुस् डाक्टर कोठारीका सुझाव
एजेन्सी । अनियमित रूपमा हस्तमैथुन गर्दा मानिसमा धेरै समस्याहरु आइरहन्छन् ।जस्तै, हस्तमैथुन गरिसकेपछि पिसाब आउने आउने लक्षण देखिन्छ तर, आउँदैन् भने यो एउटा जटिल समस्या हो ।
यो केसमा दुई कुरा हुनसक्छन् । पटक पटक पिसाब लागेजस्तो हुनुको पहिलो कारण इन्फेन्सन हुनसक्छ । यसका लागि युरिनको जाँच गराउनुपर्छ । रुटीन, कल्चर-कलोनी काउन्ट र सेन्सिटिविटीको टेस्ट कुनै राम्रो ल्याबमा गराउनुस् । यदि टेस्टमा इन्फेक्शन देखियो भने पुरै उपचार गर्नुस् ।
यो समस्याको दोस्रो कारण अनियमित हस्तमैथुन हुनसक्छ । यसमा नियमितता ल्याउन प्रयास गर्नुस् । सामान्यतया चार दिनमा एकपटक गर्नुस् । यदि १५ दिनको अन्तरमा गरिरहनुभएको छ भने त्यसलाई कायम राख्नुस् ।रिपोर्टअनुसार हस्तमैथुन गर्नुभन्दा पहिला पिसाब गरिहाल्नुस् ।
नोटः मदिरा, चुरोट, खुर्सानी–मसलायुक्त खाना कम खानुस् । यी वस्तुहरु खादा पित्त बढ्न सक्छ र दुखाई पनि बढ्छ । साथै पानी पनि पिउनुपर्छ ।
– डा. प्रकाश कोठारीबाट रगत सफा गर्ने उपाय, आफुले थाहा पाउनुस र साथीलाई पनि जानकारी दिनुस
हामीले स्वस्थ रहनका लागि भरसक प्रयास गरे पनि वरिपरिको वातावरणबाट शरीरमा विषालु तत्वले प्रवेश गरिहाल्छन् । यसरी हावा, पानी, माटो, कस्मेटिक, साबुन आदिको माध्यमबाट प्रवेश गरेमा तत्व रक्त प्रणालीमा पुग्छन् । रगतमा पुगेका खतरनाक तत्वलाई छानेर पिसाबबाट बाहिर निकाल्ने काम मिर्गौलाले गर्छ । बारम्बार अधिक मात्रामा विषालु तत्व छान्नु पर्दा मिर्गौलामाथि दबाब बढ्छ । यसैले मिर्गौलाको कार्यबोझ घटाउन हामीले पनि खानपिनमा होस पुर्‍याउनु जरुरी हुन्छ । शरीरबाट विषालु तत्व सहज रूपमा बाहिर निकाल्न मिर्गौलालाई सहयोग गर्ने केही खाद्य वस्तु निम्न छन् :
आलस : मुटुलाई अत्यन्त आवश्यक ओमेगा–३ फ्याटी एसिडको साह्रै राम्रो स्रोत आलसले रगत स्वस्थ राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ । फाइबर समेत धेरै हुने भएकाले विषालु तत्व शरीरबाट बाहिर निकाल्न आलस उपयोगी हुन्छ । यसअतिरिक्त हरियो सागपात, ब्रोकाउलीले पनि शरीरबाट विषालु पदार्थ बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छन् ।- एजेन्सी
रगत सफा गर्ने उपाय, आफुले थाहा पाउनुस र साथीलाई पनि जानकारी दिनुस